I-Biography kaCharlie Rose, i-News Anchor kunye noNobhala
Iindaba zeengxelo ze-Anchor ne-Journalist
UCharlie Rose (owazalwa ngoJanuwari 5, 1942) ngumshicileli owaziwayo, i-anchor yeendaba, kunye ne-"Charlie Rose Show." Ngoku uhlala kwiSixeko saseNew York, uRose uhlonishwa ngenxa yokusebenza kwakhe kwexesha elide kwi-journalism, ephawulwa yimiqathango yendabuko kunye neengxoxo zengxoxo zokuhlaziywa komhlaba kwi-PBS kunye ne-CBS.
Uzalwe nguCharles Peete Rose, uJr., nguye yedwa unyana wefodya ovela eHenderson, eNorth Carolina. Abazali bakaRose, uCharles noMargaret, nabo babephethe ivenkile egciniweyo, kwaye intsapho ihlala kwiphantsi lesibini kwishishini lentsapho.
UCharles oselula - okanye uCharlie, njengoko wayebizwa ngokuba - wayebandakanyeke kwishishini ekuqaleni kwentsapho yakhe, ebenzela imisebenzi emincinci eneminyaka elixhenxe.
Emva kwesikolo esiphakeme, uRose waya kwiYunivesithi yaseDuke. Ukuqala kwakhe ukuququzelela kwakhe kwaba ngumsebenzi wokuqala, kodwa loo mdla wawukhawuleza iphakanyiswe ngezopolitiko kunye nembali. Oku kwaxhaswa ngumsebenzi wakhe neNorth Carolina yeSenator B. Everett Jordan.
Waphumelela ngegriki kwimbali kwaye waqhubela phambili kumthetho kwiDyuvesi yeSikolo soMthetho. Kulapho wathola uGqirha wakhe weJuris ngo-1968. Ukongezelela, waya kwiSikolo seShishishini seNew York University.
U-Rose Ufumana Ukuphuka Okukhulu
Kungekudala emva kokugqiba, uRose waya eNew York City, apho wayesebenza njenge-freelancer ye-BBC. Kwakunceda ukuba umfazi wakhe, uMary King, naye wasebenza kwi-BBC. Wongezelela loo ntlawulo ngomsebenzi wexesha elizeleyo kwiBankiers Trust, edumileyo, kwaye ngoku i-disfunct, isikhungo seenkonzo zezezimali eNew York. Umsebenzi wakhe wokuzimela ngokukhawuleza wamfumana indawo njengomphathi weveki yeendaba zendawo.
Kwaye kwafika ukuphuka kwakhe okukhulu. Umbhali owaziwayo uBill Moyers wathandwa ngumsebenzi kaRose waza wamqesha njengomhleli olawulayo kwiprogram yakhe ye-PBS ngo-1974. Ngomnyaka kamva, uRose wabizwa ngokuba ngumlimi olawulayo "uBill Moyers Journal."
Ukusebenzisana kukaRose kunye noMoyers kwakuya kukhula, kwaye kungekudala uRose wazifumana phambi kwekhamera.
Wayesebenza kuMoyer "e-USA: Abantu kunye nezoPolitiki" kwaye wafumana ithuba lokuthetha udliwano-ndlebe no-Mongameli uJimmy Carter. Udliwano-ndlebe lwamufumana i-Peabody Award kunye nesithuba sokugqibela kwi-KXAS e-Dallas, eTexas, njengomphathi weprogram.
Esi sikhundla siza kumkhokelela kwi-CBS News kunye ne-anchor isikhundla "kwi-CBS News Nightwatch," kwenkqubo yokugqibela yasebusuku efana ne-ABC "Nightline." Wasebenza apho iminyaka emithandathu ngaphambi kokuba athathe umsebenzi njenge-anchor ye-Fox yenethiwekhi yokubonisa "Ubuntu." Ifomid yefayile efana neprogram yayininzi kakhulu kuRose, nangona kunjalo, kwaye wayishiya inkqubo kwingaphantsi kweenyanga ezimbini.
Udliwano-nxu lumano oluthile lwe "Charlie Rose Show"
Ngaphantsi komnyaka kamva, uRose waqala umboniso weentetho zakhe, "'UCharlie Rose Show' ngo-1991. Olu hlobo olusebusuku lweenkqubo zePBS lwenziwa nguRose kwaye wenza njengomhleli olawulayo kunye nomphathi. Kungekudala ngaphambi kokuba umboniso uza kuzuza ulwalamano lwesizwe kwaye kuye kwaba yinto ephambili kwithelevishini yoluntu ukususela ngelo xesha. Umboniso usasazwa kwiTloomberg Television.
Isitayela sokusayinwa sihluke kunokuba kukho nawuphi na umboniso weentetho emoyeni. URose kunye neendwendwe zakhe bahlala kwi-studio esicacile engenawo umva - i-set is literally black.
Itafile ye-oki kuphela eyahlula, ibonisa ukubonakalisa obusondeleyo abantu ababini behleli bodwa ekhitsheni ebusuku.
Ngokuqhelekileyo, uRose kunye nesigwendwe sakhe ngabantu abodwa kwi-studio ngexesha lokubetha. Iikhamera zilawulwa ngumda wokude ukusuka kwigumbi lolawulo lwe studio. Oku kuvumela iRose ukuba iqhube intsebenziswano enzulu kwaye isoloko idliwano-ncokola-eninzi njengengxoxo-kunye nabapolitiki, abadumileyo, abadlali, kunye nabahloniphekileyo abavela kwimiboniso.
I-Rose ibuyela kwi-CBS
Ngo-2012, uRose wathatha enye indima njenge-co-anchor ye "CBS Le Masa" kunye noGayle King . Uthungelwano lwazisa i-Rose isikhundla esitsha ngoNovemba 2012, sichaza ukuba sasifuna ukwenza umboniso ngakumbi kwiindaba ezilukhuni kwaye sifuna igama elifana neRose ukuze likhokele ekukhokeleni loo ntlawulo.
Uyakufumana kwakhona iRose kwi-CBS "imizuzu engama-60." Ungumbhali oqhelekileyo kwi-show, ezisa indlela yakhe yokubhala kwindabuko kumabali ahlanganisa.
U-Rose wathembisa u-Kappa Alpha Order kuDuke .
URose kunye nomfazi wakhe wokuqala, uMary King, badibana neYunivesithi yaseDuke. Batshatile kude kube ngo-1980. URose kunye nomlingani wakhe u-Amanda Burden (iNqununu eBloomberg Associates) beye behlanganisene ukususela ngo-1993.
Ngethuba lo msebenzi wango-2006 eSiriya, uRose waphefumlelwa. Wagijimela eParis waza wahlinzwa intliziyo. NgoFebruwari 2017, uRose wachaza ukuba uza kutyunjwa ukuba atshintshe i-valoric aortic yangaphambili.
URose waphindela eNorth Carolina ngoMeyi 2010 ukuhambisa idilesi yokuqala kwiYunivesithi yaseNorth State State.
U-Rose kungenzeka ukuba wayeyindoda eyaqhekeza ukulwa, emoyeni-wenethiwekhi phakathi kwe-NBC kaKeith Olbermann kunye ne-Fox News ' uBill O'Reilly . Kuwo wonke ama-2000 ubudala, abo babini behlala behlambalaza kunye nokunyanzelana. Kuthiwa uRose wangena waza waqinisekisa abaphathi benethiwekhi ukuba bakhuthaze ukunciphisa ubundlobongela.
U-Rose uye wafumana iintlonelo ezininzi zeendaba zakhe kunye nomsebenzi oqhelekileyo. Phakathi kwabo yi-Award ye-Walter Cronkite yoBugcisa kwi-Journalism kunye nebala kwixesha lika-2014 le "100 Abantu abaninzi abachaphazelekayo.
Emva kwengxoxo yakhe yoSeptemba 2013 kunye noMongameli waseSiriya uBashar al-Assad, uRose wathola umvuzo we-Emmy kunye ne-Peabody.
'Ingozi!': 10 Amaxesha amaninzi akhunjulwayo
Izizathu zokuba kutheni i-TV ingaba luhle kubantwana
Battlestar Galactica Cast: Ukwazi amaKyloni
Ukukhethwa kweeTekisi zakho zeThafile zeTebula
Ngaba 'Sí, Se Se Puede' Kuthetha 'Ewe, Sinako'?
Ibali leNdodana kaGugu Nanak
Ukwandiswa kwefayile kwiDelphi
Ngaba Uyakhumbula iLungu leNgqungquthela?
Iimveliso zeCarbon - Into Okumele Uyazi
Indlela yokufometha iNgxelo yeBaloji yeBilo
Kuphi Ukuthengwa Kwezithuthi Ezinqabileyo
Ukunyamezela Uthando Iingoma zama-1950
Iibalaxi ezingavumelekanga: Iimpawu ezimangalisayo zeMveli
Indlela Yokuvakalisa Izinto Zasekhaya ngesiTshayina
Ukuqhekeza iAil Oil
Yintoni iLoft (okanye iLoft Angle) kwiiKlabhu zeGolf?
Kuthetha Njani Ukubandezeleka?